आफ्नो मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचयपत्र लिइहाल्नुस : निर्वाचन आयोग - Radio Sagarmatha आफ्नो मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचयपत्र लिइहाल्नुस : निर्वाचन आयोग
आफ्नो मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचयपत्र लिइहाल्नुस : निर्वाचन आयोग
बैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले यही आउँदो २८ गतेदेखि निर्वाचन हुने क्षेत्रहरूमा मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्दैछ । यसपटकदेखि मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गरेको आयागले मतदानको तिनदिनअघि बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो । यसै विषयमा सहकर्मी सम्झना महर्जनले निर्वाचन आयोगका प्रवक्तासूर्यप्रसाद शर्मासँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
मतदाता परिचयपत्र वितरणको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको हो ?
यो मतदाता परिचयपत्र वितरणको तयारी लगभग पूरा भइसकेको हो । यसपालीको निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ । मतपत्र हुनेले मात्र आफ्नो भोट खसाल्न पाउनेछ । त्यसकारण मतदाताले आफूले भोट खसाल्ने मतदान केन्द्रमा गई तोकिएको समयमा मतदाता परिचय लिइदिनुहुन निर्वाचन आयोगले अनुरोध गर्दछ ।
मतदाता स्वयं नै गएर ल्याउनुपर्ने हो मतदाता परिचयपत्र ?
संम्भव भएसम्म त मतदाता स्वयंनै जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर कुनै कुनै परिवार अलि ठृलो पनि हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ परिवारका अन्य कुनै सदस्यले पनि लिन सक्नेछन् । तर त्यस्तो गर्नलाई प्रमाणित गर्ने आधार हुन चाहिँ आवश्यक छ । तर सम्भव भएचाहिँ मतदाता स्वयं नै जानुहुन म अनुरोध गर्दछु जस्ले गर्दा कुनै किसिमको झमेला खेप्नुपर्दैन ।
मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाको हकमा के हुन्छ त ? कतिपय ब्यक्तिले नामावलीमा आफ्नो नाम नभएको भनेर पनि गुनासो गरिरहेका छन् ?
मतदाता नामावलीमा नाम नहुने व्यक्तिको परिचयपत्र हुने त कुरै भएन । हामीले प्रिन्ट गरेकै हुँदैन । नामावलीमा नाम हुनेको मात्र हामीले परिचय पत्र तयार गरेका हुन्छौं । त्यही अनुसार नै उहाँहरूले भोट हाल्न पाउनुहुनेछ । नाम नभएको भनेर यदाकदा गुनासोहरू पनि आइरहेकै छन् । यो किन यस्तो भयो भन्दा उहाँहरूले पछिल्लो समयमा टिपाएको नाम तथा ठाउँ परीवर्तन भएको हुँदा यस्तो हुन पुगेको हो । तर कसैले दोहो¥याएर अन्त नामावली दर्ता गराउनुभएको छैन भने त्यस्तो ब्यक्तिको परिचयपत्र अवश्य नै हुन्छ ।
आवश्यक सामग्री मतदान केन्द्रमा कहिलेसम्म पुगिसक्छन् ?
हामीले मतदानस्थलमा आवश्यक सामग्री पठाउन सुरु गरिसकेका छौं । मलाई लाग्छ २७ गते भित्रमा सम्पूर्ण स्थानमा पुगिसक्छ । दुर्गम ठाउँहरूमा हेलिकप्टर र अन्य गाडीमार्फत हामीले सामग्रीहरू पठाइरहेका छौं । २८ गतेबाट वितरण सुरु हुन्छ ।